Tsalela umnxeba: 086-13171718191
Iipakethe zokucoca i-mesh
Iimpawu zokucoca insimbi engenasici
ngomphathi ku 20-10-11
Izinto zokucoca insimbi ezingenasici zahlulahlulwe zaba zizinto zokucoca ulwelo, kunye nezinto zecwecwe lokucoca ulwelo. Iimpawu zento yokuhluza yesinyithi yile: inokusetyenziswa phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu; ityesi ...
Uyenza njani inkampani yakho ukuba iphuhle ngokuthe chu kukhuphiswano oluphezulu ezilishumi
Uyenza njani inkampani yakho ukuba iphuhle ngokuthe ngcembe kukhuphiswano oluphezulu oluphezulu Ukuze nayiphi na inkampani ikhule ngokuzinzileyo nangokuzinzileyo, kufuneka ihlakulele ukhuphiswano lwayo oluphambili. Ukhuphiswano oluphambili lweshishini lubonakaliswa kuqala kubuchule obuthile. Ukhuphiswano oluphambili lwe ...
Amanyathelo okhuseleko kunye nokugcinwa kwezixhobo zokucoca ulwelo
Amanyathelo okhuseleko kunye nokugcina ukusetyenziswa kwezixhobo zecebo lokucoca ulwelo: Phambi kokuba usebenzise isixhobo sokucoca intsimbi esingenasici, kufuneka ujonge ukuba izincedisi kunye nemisesane yokutywina iphelele na nokuba yonakele na, emva koko uyifake njengoko kufuneka njalo. Icebo lokucoca ulwelo elitsha kufuneka licocwe ngesicoci (nceda ungenzi ...
Ukusetyenziswa kwento yokuhluza intsimbi engenasici kwi coalescer
ngomphathi ku 20-07-09
Isicoci sentsimbi engenacici sahlulwe saza sahluza isihluzo, sintered waziva isihluzo kwaye sintering isihluzo. Izinto ekrwada sintered umnatha isihluzi element yenziwe ngentsimbi stainless sintered umnatha. Isixhobo sokucoca insimbi esingenasici sisetyenziselwa ukuhluza izixhobo ...
Isixhobo sokucoca ulwelo lwesinyithi esingenanto
Isihluzo esiveliswe ngumenzi weplanga yensimbi engenasici inoluhlu olubanzi lwezicelo, kwaye iimveliso ezininzi zisetyenziswa njengesihluzi semithombo yeendaba. Isixhobo secebo lokucoca esiveliswa ngumenzi wesixhobo esenziwe ngentsimbi engenasici senziwe ngetambo yocingo; ngamanye amaxesha phakathi kwesikrini ...
Icebo lokucoca ulwelo lwentsimbi
Sonke siyazi ukuba into yokuhluza intsimbi engenasici ayinakho ukumelana nokubola, kodwa inokubonakala okuhle kunye nezinye izinto. Uluhlu lwesicelo sensimbi engenasici ngakumbi nangakumbi, kwaye kunokubonwa kuyo yonke indawo ebomini bethu. Ziziphi iimpawu zentsimbi engenasici ...
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.yophando